IHuawei P30 Pro, ingaphezulu kwekhamera yokuhlaselwa sisifo sentliziyo [Uphengululo] | I-Androidsis
Njengoko usazi kakuhle, okoko kusungulwa usuku eParis akukho nto ezandleni zethu ngaphandle kweHuawei P30 Pro, siyakushiya kwesi sixhobo ukubonakala kwethu kokuqala kwaye ngokuqinisekileyo ukungabikho kwebhokisi kwesixhobo. Nangona kunjalo, besele sinayo ezandleni zethu phantse iveki kwaye ngoku lixesha lokuba ndikunike ithuba lokuba ubone uhlalutyo lwethu olunzulu.
Nangona kunjalo, ukufikelela kwisigqibo kufuneka uhambe nathi, kuba siza kukuxelela nganye yeenkcukacha zayo. Fumanisa zonke iinkcukacha zale projekthi yeHuawei P30 engaphezulu kwekhamera enomtsalane kunye nokuzimela okuninzi, ngaba yeyona ilungileyo?
akufuneki kutsho Ndiyakumema ukuba uye kule vidiyo apho uza kubona khona yonke into endinokukuxelela yona aphaNangona kunjalo, idatha iya kuba ngakumbi ngakumbi kwaye ikhonkrithi kolu hlalutyo lubhaliweyo, apho uya kuba nakho ukujonga ngokukhawuleza kuphela ezo nkcukacha zinomdla kuwe. Nangona kunjalo, ithuba elifanelekileyo lokuxhasa uluntu lwe-Androidsis ngokuchanekileyo kukujonga iividiyo zethu kwaye usishiyele "ukuthanda" ukuba uyithandile. Jonga esi siphelo ngokuthe ngqo kwiAmazon.
1 Uyilo kunye nezinto zokusebenza: Eyona intle kakhulu kwintengiso
2 Umxholo wephakheji -Ukungabikho kwibhokisi
3 Iimpawu: Ukusebenza okuphezulu, izixhobo ezivavanyiweyo
4 Iikhamera kunye nescreen: Eyona khamera intle kwintengiso yesikrini "esiqhelekileyo"
5 Eyona nto ibalulekileyo yesikrini, ukuzimela kunye nokunye okuninzi
6.1 Okubi kakhulu
6.3 Eyona nto ibhetele
Uyilo kunye nezinto zokusebenza: Eyona intle kakhulu kwintengiso
Kwinqanaba loyilo, uHuawei ubeke yonke inyama kwi-grill, saphinda safumana izinto zentsimbi zesakhelo kunye neglasi. Le glasi ngasemva igobile kancinci emacaleni, njengoko kunjalo nakwisikrini, oku kuyenza ibeyinyani, ngaphandle kwayo iphantse ibe zii-intshi ze-6,5, kwenye yeefowuni ezikhululekileyo esiye sazihlalutya ngalo lonke eli xesha, sikhululeke kancinci kuneHuawei Mate 20 Pro kwaye sikhululeke ngakumbi kunesiphelo sokhuphiswano oluthe ngqo njenge-iPhone XS Max. Esi sixhobo siza kuboniswa ngemibala eliqela: I-Pearl White (emhlophe emsulwa), i-Breathing Crystal (iyunithi esiyijongayo), Mnyama, Amber Sunrise (ithambeka phakathi kobomvu neorenji) kunye neAurora (ithambeka phakathi kohlaza okwesibhakabhaka noluhlaza).
Ubungakanani: Ubukhulu: 158 x 73,4 x 8,4 mm
Imibala: I-Pearl White, i-Crystal Breathing, iMnyama, i-Amber ukuphuma kwelanga kunye ne-Aurora.
Njengoko sibona, iyahambelana. Kwakhona ngaphambili, apho sinesakhelo esincinci esisezantsi kakhulu, phantse isakhelo esisecaleni ngenxa yokujika kwescreen kunye nokugqiba indawo ephezulu nge Ukuhla kwesiphumo seNotshi Okona kuncinci, ukushiya inotshi enkulu yeHuawei Mate 20 Pro.Sinomahluko nesizukulwana esidlulileyo kunye nazo zonke ezikhoyo, inyani yokuba umda ongasentla nongasezantsi une-engile elungileyo egqibezela uyilo endinalo ukuze ufaneleke njengobalaseleyo. Ukucwangciswa kwekhamera ethe nkqo kuyaqhubeka neP Series Saga, ngelixa inkcukacha ekufuneka ithathelwe ingqalelo yinto yokuba zombini iflash kunye nekhamera ye-ToF kunye ne-laser sensor zidityanisiwe kwisembozo seglasi esingasemva, into ephantse ingekhoyo kwi-smart mobile telephony namhlanje kwaye ngokobuqu ibambe ingqalelo yam. Kwinqanaba leminwe kunye nokungcola, njengoko kuhlala kusenzeka kwezi terminals zibuthathaka kakhulu, iminwe iya kuba yinkampani engapheliyo.
Umxholo wephakheji -Ukungabikho kwibhokisi
Kwinqanaba le-unboxing Huawei Khange ivelise nantoni na, uninzi lwaphupha ngokufakwa kwee-headphone ezingenazingcingo okanye nayiphi na enye into enokusishiya sithe cwaka, kodwa inyani yeyokuba iH Series yeHuawei ayikaze ibe luluhlu lwePremiyamu, ke ayifanele isimangalise kakhulu. Sinebhokisi ephantse yafana neenguqulelo zangaphambili ezibandakanya konke oku: 40W itshaja ekhawulezayo; Iifowuni ze-USB-C; Incwadi yesiqinisekiso kunye nemiyalelo; Icala le-silicone elicacileyo; Intambo yokutshaja ye-USB-C; Isiphelo sendlela yeHuawei P30 Pro.
Eyona nto ibalaseleyo ngaphandle kwamathandabuzo kukuhlawuliswa okukhawulezileyo ukuya kuthi ga kwi-40W ebandakanywe ngokungagqibekanga, ekwaziyo ukusinika I-71% yebhetri iyonke kwisiqingatha seyure, Kuyamangalisa ngakumbi ukuba sijonga ukuba esi sixhobo singekho ngaphantsi kwe-4.200 mAh. I-USB kwi-USB-C yokutshaja intambo kunye nee-headphone zihlala kumgca weHuawei. Kwaye uthi, kutheni ii-headphone ze-USB-C? Kulungile kuba ngeli xesha U-Huawei uyilahlile i-3,5mm Jack kwimodeli yeP Pro ye-P30, nangona kufuneka sibonise ukuba asizukubanayo i-USB-C ukuya kwi-3,5mm iadaptha yeJack, inkcukacha endenze buhlungu.
Iimpawu: Ukusebenza okuphezulu, izixhobo ezivavanyiweyo
Inkqubo IKirin 980 ezisibhozo-ezingundoqo -
Ukugcinwa kwangaphakathi I-128/256/512 GB (iyandiswa nge-nanoSD)
Ikhamera esemva I-MP ye-40 yokuvula i-f / 1.6 + ye-20 MP ye-engile ebanzi engu-120º ngomngxuma f / 2.2 + 8 MP nge-f / 3.4 + TOF sensor
Conectividad I-Bluetooth 5.0 jack 3.5 mm i-USB-C ye-WiFi 802.11 a / c iGPS GLONASS IP68
Ezinye izinto Inzwa yeminwe edityanisiweyo kwiscreen- i-NFC-Ukuvula ubuso -I-Dolby Atmos -Inzwa ye-infrared
Iimpawu zale Huawei P30 Pro ziyaziwa, iqela laseHuawei alithandi ukwenza izinto ezintsha kakhulu kuluhlu lwe-P Series, ekhetha ukubeka phambili iM Mate Series kule meko. Nangona kunjalo, oku kunenzuzo ebalulekileyo, kwaye loo nto kukuba iHuawei P30 ikhethile I-Kirin 980 isibhozo esibalulekileyo kunye namandla aqinisekisiweyo, asinika wona Amanqaku angama-261.115 kwi-AnTuTu, ihamba kunye I-8 GB ye-RAM kunye neMali G76.
Ke ngoko, kufuneka sibheje kwamanye amacandelo ukuqaqambisa, umzekelo inyani yokuba ibandakanya i-infrared sensor eya kuthi, phakathi kwezinye izinto, ilawule umabonwakude kunye nomoya opholileyo. Kwinqanaba lesandi sinenkqubo entsha yestereo, ene isithethi esiphambili emazantsi, ngelixa isithethi sefowuni sibekwe ngasemva kweglasi. Kudala sivavanya kwaye Siqinisekisile ukuba umgangatho kunye namandla esi sithethi sidityaniswe ngasemva kwescreen sinika ukusebenza ubuncinci obufanayo nobesithethi sendabuko, elinye icala kwinqanaba lokutsha elongeza iinombolo zeHuawei P30 Pro.
Iikhamera kunye nescreen: Eyona khamera intle kwintengiso yesikrini "esiqhelekileyo"
Izinto zangaphakathi emotweni
Sikwinqanaba lekhamera ngokudibanisa okungcono kwimarike, asitsho njalo, i-DxOMark iyenza icace, ayiniki amanqaku angaphantsi kwama-112 ayishiya kwindawo yokuqala. Ngaba inzwa ye-MP eyi-40 ene-aperture f / 1.6, enye i-20 MP ebanzi ye-engile engu-120º ene-f / 2.2 kwaye ekugqibeleni i-8 MP nge-f / 3.4 yonke ikhatshwa sisenzi senzwa se-ToF esisinika isiphumo esigqibeleleyo «imo ye-portrait». Kwikhamera yangaphambili akukho ngaphantsi kwe-32 MP ene-f / 2.0 yokuvula kunye nawo onke amanqanaba kwinqanaba lesoftware 'lodade wabo abakhulu. Sikushiya ngezantsi koluhlu lweemvavanyo ukuze ukonwabele i-hybrid zoom 1x, 5x, 10x ukuya kuthi ga kwi-50x, ayikaze ibonwe ngaphambili kwisixhobo esiphathwayo esinezi mpawu, ngelizwi: umtsalane. Kwelinye icala, sineendlela ezahlukeneyo zokurekhoda esizuze njengelifa kwi-Huawei Mate 20 Pro enjengombala nge-AI, isiphumo somzobo esenziwe kwikhamera yevidiyo ebukhoma kunye neefilitha ezithile ezisivumela ukuba sibe neziphumo ezingcono. Siyakubongoza ukuba uye kuvavanyo lwethu lwekhamera esiza kulwenza kwiintsuku ezimbalwa.
Ngokubhekisele kwiscreen, siyayonwabela ipaneli ye-OLED eyi-6,47-intshi ngesisombululo esigcweleyo se-HD + se-2.340 x 1.080 pixels kunye ne-19.5: 9 ratio. akukho nto ingako kwaye akukho nto ingaphantsi. Impikiswano enkulu yokunciphisa isisombululo se-2K ebonelelwa yiHuawei Mate 20 Pro, ngakumbi ithathela ingqalelo ubungakanani bescreen. Kuyinyani ukuba uHuawei wayenokubheja kwisisombululo esincinci, kodwa ngokunyaniseka, ukusetyenziswa kwemihla ngemihla akusileli, enyanisweni ndikufumanisa kuyanelisa nakumaqondo okutyekela, nangona "iziphumo zomnyama" okanye ukwahluka kwemibala yeepaneli ze-OLED zezi mpawu zihlala zibonakala, ngakumbi zisazi ukuba ligobile kumacala .
Eyona nto ibalulekileyo yesikrini, ukuzimela kunye nokunye okuninzi
Ndifumene kuvavanyo oluninzi ngokuphendula ngokukhawuleza kwimibuzo yakho, Inzwa yeminwe esesikrinini yeHuawei P30 Pro ibonakalisiwe xa kuthelekiswa naleyo ye-Mate 20 Pro kunye ne-Samsung Galaxy S10 njengeyona intle kwintengiso. (Olu luluvo lwam oluzimeleyo). Lowo undibekele izithintelo ezincinci endleleni kwaye undinike iziphumo ezilungileyo. Inqaku elinye ekufuneka lithathelwe ingqalelo ekufumaneni kwezi mpawu.
Ngokwenxalenye yayo ngokwebhetri sinokukhetha, I-4.200 mAh ene-SuperCharge ukuya kuthi ga kwi-40W eya kukunika ibhetri engekho ngaphantsi kwe-70% enemizuzu engama-30 kuphela yokutshaja. Ngokwam, kwiimeko eziqhelekileyo, ndikwazile ukufikelela esiphelweni sosuku nge-30% yebhetri, ndifuna ukuba ufike ngokulula ekupheleni kosuku ngaphandle kokukhathazeka kwaye ngokungazisebenzisiyo wenza iintsuku ezimbini ungaphazanyiswa. Kwakhona uHuawei ubonakalisile ukuba ibhetri ibaluleke kakhulu kubasebenzisi bayo.
Sinezinye izinto ezijikeleza imveliso ezinje Isandi seDolby Atmos Ukonwabela umxholo wee-audiovisual zamaqonga ahambelanayo anjengeNetflix, izithethi zanele, ngaphandle kokufikelela kumanqanaba anikezelwa ziitheminali ezinje ngeHuawei Mate 20 Pro okanye i-Samsung Galaxy S10 +, mhlawumbi elinye lamanqaku ayo. Kwenzeka into efanayo nakwifayile ye- Ukuxhathisa kwamanzi nge-IP68 ukuba sivavanye kule mihla yethu kwaye ungabona kwisiteshi sethu seYouTube. Kwelakhe icala I-NFC iyakusivumela, phakathi kwezinye izinto, ukuba sisebenzise iindlela zokunxibelelana ngaphandle konxibelelwano kwaye i-band-band yayo ye-WiFi ithathe ithuba kuzo zonke "i-megabytes" esizenzileyo ekhaya ngenxa yebhanti ye-5 GHz.
Iscreen se-2K sinokuyibeka njengeyona intle kwintengiso
Eyoyikekayo kubathandi beJack 3,5mm
Elinye ixesha kunye nesixhobo sasekhaya, Into endiyithandayo kancinci ngale Huawei P30 Pro yi-EMUMna, ngaphandle kwento yokuba uhlaziyo olufunyenwe ngexesha lohlalutyo kwi-EMUI 9.1 lube mnandi, ngakumbi ekuphunyezweni kokuhamba ngokukhawuleza kwendlela, isenothotho lwezicelo ezifakwe njengomgangatho ongafanelekanga kwisiphelo seli xabiso. Kwelinye icala, isikrini, nangona silunge kakhulu, sifuna kwindawo yam yokujonga ulungiso lomsebenzisi ngenxa yokugcwala kwemibala ayibonisayo.
Esona sivamisi somnwe sokucola umnwe ndikhe ndazama
Eyona khamera yefowuni ukuza kuthi ga ngoku
Ukuzimela kakuhle kunye nokuhluka kwemithwalo
Eyona nto ndiyithandileyo yile ikhamera yakho emangalisayoAlithandabuzeki elona lihle kwintengiso kwaye akukho nto inokukhalaza ngayo, yonwabele iifoto ezithathiweyo. Kwelinye icala i isivamvo somnwe ibonakalise ukuba yeyona nto ibalaseleyo kwezikwisikrini, ngelixa ukuzimela Kukucaphuka okwenyani, kusivumela ukuba sonwabe kwisiphelo sendlela ngaphandle kokuhlala siyazi le nkcukacha.
IHuawei P30 Pro-Ukuphonononga
Sinako ukufikelela koku Isiphelo esisuka ku-949,99 kwiindawo ezininzi zentengiso eSpain NjengoCarrefour, ukufikelela ngokulula kwisiphelo esiyi "Pro" ngokwenyani ngokwendlela yokusebenza kunye namandla, ukuyenza ukuba ibe yeyona nto ibalaseleyo kwingingqi ye-Android, nditsho nokulwa ngokuthe ngqo nenye indlu njengeHuawei Mate 20 Pro. Nangona kunjalo, le yokugqibela kuphela "iyalahleka" ngeP30 Pro ngokwekhamera, hayi kakhulu, ukuze ngexabiso elifanayo kubekho ukungathandabuzeki phakathi komsebenzisi. Umbala wombala okhethwe nguHuawei ubonakala ngathi uphumelele kum, yiyo loo nto ulawula ukukholisa abambalwa abasebenzisa ubuntu obahlukeneyo. Olu ke luvo lwam lokugqibela lokuba ngale Huawei P30 Pro ndizifumana ndiphambi kwesinye sezona zixhobo zisemgangathweni ezakhelwe i-Android endiye ndayihlalutya kwi-Androidsis, isixhobo esinconyelwe kakhulu, esinezibane kunye nezithunzi, kodwa oko kuya kuzilawula. ixesha elide onke amehlo abantu, ngakumbi xa iinkampani zingxama ukunika amaxabiso angenakuphikiswa, Ngaba iya kuba yenye yezona zinto zithengiswa kakhulu eSpain?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » IHuawei P30 Pro, ingaphezulu kwekhamera yesifo sentliziyo [Uphengululo]
Ikhamera kaGoogle yongeza imowudi emnyama kunye noopopayi abatsha